Thezọ kachasị ọsọ na kachasị mfe nke ịgbanye saịtị gị | Martech Zone
Tuesday, August 30, 2011 Sunday, Jenụwarị 19, 2014 Douglas Karr
Site na ndị na - eweta nnabata anyị, ewebata m Igwe ojii. O juru m anya na ọrụ… karịsịa mmalite mmalite (n'efu). Mgbe m rụrụ ọrụ maka onye na-eweta SaaS buru ibu, anyị ahazi ọrụ geocaching ma ọ na-efu anyị ọtụtụ iri puku dollar kwa ọnwa. Enwetaghị CloudFlare maka onye na-eweta SaaS, mana ọ zuru oke maka weebụsaịtị ma ọ bụ blog gị.
CloudFlare bụ ọrụ na-eji teknụzụ nwere ikike ime ka weebụsaịtị na-agba ọsọ na nchekwa na ngwa ngwa gburugburu ụwa. CloudFlare na-agbazi ebe data 12 dị ugbu a (yana ndị ọzọ n'ụzọ) na kọntinent atọ iji nye ihe ntinye ọdịnaya ọdịnaya, nzacha bot na ndị ọzọ. Nke a bụ nkọwa nke ọrụ ahụ:
Ọrụ ahụ adịworị mma maka Martech Zone. Lee anya na nchịkọta n'okpuru, karịsịa maka chaatị dị na ntọala nke akụkọ ndị ahụ.
Tupu tinye n'ọrụ CloudFlare, m na-agabiga oke ojiji na akaụntụ nnabata m. CloudFlare ebipụla ojiji ahụ na ọkara - na-egbochi ọkara nde echiche peeji na ịchekwa 5Gb nke bandwit. Ọ bụrụ na ị na-achọ ịmata etu sistemu ndị a si eme nke a centers etinyere ebe data na mpaghara na mba ahụ. Mgbe onye nọ na mpaghara ala rịọrọ ibe gị, a na-echekwa ibe ahụ na mpaghara. Mgbe onye na-esote na-abịa - kama ijere site na ihe nkesa gị ọzọ, mpaghara data CloudFlare dị na mpaghara na-eje ozi na ibe.
Na mgbakwunye, kemgbe iji ọrụ a, ahụla m mbelata dị ukwuu na BOT SPAM na-enyefe nkọwa. O yiri ka CloudFlare na-arụ nnukwu ọrụ na igbochi okporo ụzọ ahụ iru na sava ahụ. Naanị nkatọ m nwere ike ịchọpụta na webụ maka CloudFlare bụ na ha anaghị efe ọsịsọ ọsọsọ; otu o sila dị, ahụbeghị m oge ọbụla onye nnabata m si na California.
Ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ na blọọgụ, weebụsaịtị ma ọ bụ ngwa ecommerce ma enweghị ike ịkwalite mmepe maka nkwado mkpuchi, ma ọ bụ ọrụ mkpuchi dị elu dị ka Akamai… nke a bụ azịza zuru oke maka gị! Page ibu ugboro dị oké egwu maka ịbawanye pịa-site na ọnụego na ogo na engines ọchụchọ. Di na nwunye di na nwunye gbanwere (nke edere nke ọma) ma ị na-agba ọsọ na CloudFlare!
Tags: ige ntiezi dataakụkọ ihe mere emehotelkedu etu esi emefu egomgbasa ozi mgbasa oziala nke na-elekọta mmadụngwa oku oku
Aug 30, 2011 na 4:56 PM
Anọ m na-eji Cloudflare kemgbe oge opupu ihe ubi ahụ wee hụ otu ihe ahụ. Ọ dị mma ịme ngwa ngwa na saịtị ma ọ bụrụ na saịtị gị agbadata, ha nwere ike idobe nsụgharị ya n'ịntanetị maka obere oge. Ọ bụ ihe achọrọ inwe ọrụ maka weebụsaịtị ọ bụla ụbọchị ndị a.